ब्रेकिसेफली: यो के हो, लक्षण र उपचार | कुकुरहरु को विश्व
ब्रेकिसेफली: यो के हो, लक्षण र उपचार
कुकुरको खोपडीको आकारले उनीहरूको स्वास्थ्यलाई असर गर्न सक्छ, तिनीहरूलाई निश्चित बिरामीहरूको खतरामा पार्दछ। यस अवस्थामा ब्रेकीसेफली वा ब्रेचिसेफेलिक सिन्ड्रोम, मुख्यतया समतल कुकुरहरूको कुकुरको आकारसँग सम्बन्धित छ। तसर्थ, यसले श्वासप्रश्वास समस्याहरूको शृंखला बनाउँछ जुन तपाईंको स्वास्थ्यलाई गम्भीर रूपमा असर गर्न सक्छ।
1 ब्रेकिसेफली भनेको के हो?
2 ब्रेकिसेफलीसँग सम्बन्धित समस्याहरू
3 यस सिंड्रोममा प्रजनन हुने प्रजातिहरू
4 पशु चिकित्सा उपचार
5 के यो रोक्न सकिन्छ?
6 घर हेरचाह
ब्रेकिसेफली भनेको के हो?
यो शब्दले कुकुर जातलाई जनाउँछ जसको फराकिलो र छोटो खोपडी र अन्य भन्दा मुस्कान छ। यो विशिष्ट मोर्फोलोजी भनेको हवाको फोक्सोमा पहुँच गर्न कम ठाउँ छ। साथै, उनको वाइन्डपाईप संकुचित छ, जुन कुकुरमा सास फेर्ने गाह्रो समस्या पैदा गर्दछ र तातो स्ट्रोकको लागि यो अधिक कमजोर बनाउँछ।
यी कुकुरहरूको हड्डी साँघुरो छ, तर तिनीहरूका बाँकी अंगहरू होइन। एक उदाहरणको रूपमा हामी सफ्ट तालुलाई नाम दिन सक्छौं, जसले नाकको गुहा र मुख पछाडि छुट्याउँछ। यो असंतुलनले हावा भित्र पस्न गाह्रो बनाउँछ, जसले हावा मार्ग रोक्न सक्छ।
यदि यो हाम्रो कुकुरको मामला हो भने, हामी यसलाई खर्राउ, थकान वा अत्यधिक लार जस्ता लक्षणहरूमा ध्यान दिनेछौं।
ब्रेकिसेफलीसँग सम्बन्धित समस्याहरू
El ब्रेचिसेफेलिक सिन्ड्रोम गम्भीर लक्षणहरूको कारण गर्दछ निम्नको रूपमा:
सास फेर्न गाह्रो।
नेत्रश्लेष्मलाशोथ र अत्यधिक च्यात्नु।
लेरेन्जाइटिस र ग्रसनीशोथ (कडा सूजनको साथ)
खराब तापमान नियमन।
जठरांत्र संबंधी विकारहरू।
यी समस्याहरूले अत्यन्त गम्भीर रोगहरू निम्त्याउन सक्छ यदि समयमै उपचार गरेन। त्यसकारण, थोरै संकेत मा, हामी पशु चिकित्सक जानु पर्छ।
यस सिंड्रोममा प्रजनन हुने प्रजातिहरू
सानो खोपडी र फ्ल्याट थूथन भएका सबै कुकुरहरूले यस रोगविज्ञानबाट ग्रस्त हुनुपर्दैन, तर हामीले सुरुमा भनेझैं तिनीहरू अन्य जातका तुलनामा बढी सम्भावित हुन्छन्। जो यो सिन्ड्रोमबाट पीडित सबै भन्दा बढी संवेदनशील छन्, तिनीहरूको आकृति विज्ञान को कारण, तिनीहरू हुन्:
पग वा पग।
राजा चार्ल्स Spaniel।
पशु चिकित्सा उपचार
स्पष्ट रूपमा, हामी हाम्रो कुकुरलाई यी सबै कष्टहरू भोग्न दिन सक्दैनौं। यी लक्षणहरू दिइएमा, हामी पशु चिकित्सकमा जानै पर्छ, जसले पशुको जाँच गर्नेछ र यसको लागि सबैभन्दा उचित उपचार निर्धारण गर्दछ। उपचार धेरै कारकहरु मा निर्भर गर्दछ, जस्तै उमेर, रोग को राज्य र कुकुर को स्वास्थ्य को सामान्य राज्य (एलर्जी, अन्य रोग, अघिल्लो शल्य चिकित्सा, आदि)।
त्यहाँ बिभिन्न विकल्पहरू छन्, यद्यपि तीन सबैभन्दा साधारणहरू तल प्रस्तुत गरिएका छन्:
औषधि। लक्षण ब्रोन्कोडाइलेटर र एन्टी-इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स द्वारा कम गरिन्छ।
अक्सिजन मेशिनहरू। अधिक र अधिक पशु चिकित्सकहरूले यी मेशिनहरूको प्रयोग सल्लाह दिदैछन्, जसले कुकुरलाई घण्टा सास फेर्न मद्दत गर्दछ।
शल्य चिकित्सा यो सब भन्दा साधारण उपचार हो। केसमा निर्भर गर्दै, नासिका फराकिलो लागि एक राइनोप्लास्टी, नरम तालु छोट्याउन एक palatoplasty, polyps हटाउन एक polypectomy त्यहाँ त्यहाँ (सामान्यतया एन्डोस्कोपी द्वारा) वा laryngeal saccules को हटाउनु हो (त्यो हो, धेरै नरम ऊतकको। )।
के यो रोक्न सकिन्छ?
जनावरको एनाटॉमीसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित छ, ब्रेकीसेफली रोक्न सकिदैन। यो ध्यानमा राख्नुपर्दछ कि यो मानवको हात हो जसले यी दौडहरूलाई आफ्नो मनपराउनको लागि सिर्जना गरेको छ वा परिमार्जन गरेको छ, यसले हुन सक्ने परिणामहरूको बारेमा सोचे बिना। यो सिन्ड्रोम ती मध्ये एक हो। यदि हामी पाल्तु जनावरको रूपमा छोटो जातको कुकुर चाहन्छौं भने हामीले यो समस्यालाई ध्यानमा राख्नु पर्छ।
पशु चिकित्सकले हामीलाई सल्लाह दिने उपचारको अतिरिक्त, हामी हाम्रो घरबाट केही कार्यनीतिहरू गर्न सक्दछौं लक्षणहरू कम गर्न र कुकुरको जीवनको गुणस्तर सुधार गर्न।
तातो नलगाउनुहोस्। यी कुकुरहरूको फोक्सो क्षमता कम गरिएको छ, उनीहरूलाई उनीहरूको शरीरको तापक्रम नियमित गर्न गाह्रो बनाउँदछ। तसर्थ, उच्च तापमान को अनुहार मा गम्भीर सास फेर्न कठिनाई भोग्नु पर्छ र तातो स्ट्रोकको लागि धेरै संवेदनशील हुन्छ। यसैले यो उत्तम छ कि हामी यी जातहरूलाई तातो ठाउँबाट टाढा राख्छौं। तातो महीनामा, हामीले घरमा पर्याप्त शीत वातावरण सिर्जना गर्नुपर्नेछ (एयर कन्डिसन एकदम बलियो नबनाईकन) र जनावर जहिले पनि पानी उपलब्ध छ भन्ने कुरा निश्चित गर्नुपर्दछ। हो, हामीले कहिले कुकुरलाई कारमा लक गर्न छाड्नु हुँदैन, केही मिनेटको लागि पनि होइन।
मध्यम व्यायाम जब ब्रेकीसेफली कुकुरले सास फेर्छ, उसको वायुमार्ग ढल्न सक्छ। त्यसकारण यो धेरै महत्त्वपूर्ण छ कि हामी अत्यधिक व्यायाम त्याग्नु हुँदैन। आदर्श कम तातो घण्टाको समयमा सुस्त हिंड्नु हो, सधैं हातमा ताजा पानी बोक्नु।
मोटापा रोक्नुहोस्। अधिक तौल हुनु कुनै कुकुरका लागि नराम्रो हुन्छ, तर छोटो नाकका जातहरूका लागि यो झन् खराब हो। यसको लागि हामीले जनावरलाई दैनिक हिंड्ने र कम फ्याटयुक्त भोजन प्रदान गर्नुपर्नेछ।
कलरको सट्टा दोहन। सास फेर्न समस्या हुँदा, यी कुकुरहरूले कलर लगाउनु हुँदैन। हार्नेस राम्रो विकल्प हो किनकि यसले तपाईको विन्डपइपमा दबाब दिदैन।
तपाईंको नाक सफा राख्नुहोस्। नाकको दाँत, आँखा, थुनिएको पट र नाकको बारम्बार सफा गर्दा पशुलाई राम्रो सास फेर्न मद्दत हुनेछ।
बारम्बार पशु चिकित्सा जाँचहरू। यस सिन्ड्रोमको कुनै पनि क्लासिक लक्षणहरूको सामना गर्नुपर्दा, हामी तुरून्त पशु चिकित्सकमा जानु पर्छ। यद्यपि यो आवश्यक पनि छ कि हामीले खोप तालिका र आवश्यक संशोधनहरूको पालना गर्नु पर्छ।
लेखको पूर्ण मार्ग: कुकुर संसार » सामान्य कुकुरहरु » रोगहरू » ब्रेकिसेफली: यो के हो, लक्षण र उपचार
कुकुरहरूका लागि क्यारियर, के तपाईंलाई थाहा हुनुपर्दछ
लाब्राडोरको कुकुरको विशेषता, हेरचाह र व्यवहार